March 23, 2019 - Pardeshi Khabar
काठमाडौँ ९,चैत्र| सन्तबहादुर पुनलाई विश्वास छ, ‘मान्छेको भाग्य मात्रै होइन आयु पनि पहिल्यै लेखिएको हुन्छ । पहिल्यै लेखिएको हुन्थेन र कर्मअनुसारको फल पाइन्थ्यो भने म पहिले नै माटोमा मिलिसकेको हुनेथिएँ !’ उनी पत्नी मायालाई बारम्बार भनिराख्छन्, ‘मलाई कहिले के पर्छ भनेर चिन्ता गर्नुपर्दैन । जुन दिन ममाथि घटना घट्छ, त्यो दिन मात्रै रुने हो । दुःख मान्ने हो । जति दिनसम्म बाँच्न पाइन्छ, त्यति दिनसम्म म अनलाइन आइहाल्छु ।’ माया भने मनमा भने डर छ, सन्तबहादुर कुन दिन अफलाइन जाने हुन् ! १९ वर्षदेखि मृत्युदण्डको सजाय पर्खेर बसेका सन्तबहादुर साउदी अरबको कुरैयात जेलमा छन् ।फुर्सदमा
परदेशी खबर /२३ मार्च २०१९, कुवेत lमाउण्ट एभरेष्ट स्पोर्टिङ क्लवको योजनामा हिजो कुवेतको फाहाहिलस्थित सुकशवा फुटबल मैदानमा १७औं माउण्ट एभरेष्ट एम.बि. बमजन गोल्ड कप फुटबल टुर्नामेण्टको पहिलो र क्वार्टर फाईनल चरणका सबै खेलहरु एक सौहार्दपूर्ण बातावरणमा सम्पन्न भएको छ । उक्त खेलमा १२ सशक्त नेपाली टिमहरुले सहभागीता जनाएको गोल्ड कपको कार्यक्रममा नेपाली राजदुतावास कुवेतका का.वा. राजदूत प्रकाश मणी पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न खेलहरुमा क्लब अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद पोखरेलको सभापतित्व, दुतावासका श्रम-सहचारी ज्ञानेन्द्र शर्मा, क्लवका बरिष्ट सल्लाहाकार तथा गोल्ड कपका संस्थापक राजेन्द्र तामाङ लगाएत कुवेतमा कृयाशिल विभिन्न संघ-संस्थाका पदाधिकारी, बुद्दिजिवि, पत्रकार,फुर्सदमा
कुवेत, खेलकुद, ताजा खबर, नेपाली खबर, परदेशी समाचार, प्रमुख समाचार, प्रवास, फोटो ग्यालरी No Comments »
भोलिबाट सुरु हुने एसईईको सम्पूर्ण तयारी पुरा, देशभरबाट चार लाख ७५ हजार विद्यार्थी सहभागी हुँदै
परदेशी खबर- । काठमाडौं । यस वर्षको एसईई परीक्षा आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ । यस वर्षदेखि पहिलोपटक सङ्घीय संरचनाको स्वरुपअनुसार भोलिबाट शुरु भई आगामी २१ गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा नियमित, ग्रेडवृद्धि र प्राविधिक धारका परीक्षार्थी सहभागी हुनेछन् | परीक्षार्थीमध्ये दुई लाख ३६ हजार ४ सय ४५ छात्र र दुई लाख ३८ हजार ५५८ छात्रा छन् । परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले परीक्षामा सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ बाट एक लाख ६०२ परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन् । कम कर्णाली प्रदेशबाट ३५ हजार ६२४ परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन् । त्यस्तै प्रदेश नं १ बाट ८३ हजारफुर्सदमा
काभ्रेको भकुण्डेमा ‘तेस्रो तामाङ चलचित्र महोत्सव’ हुँदै
परदेशी खबर- । तामाङ चलचित्र संघको आयोजनामा काभ्रे जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिकाको सुन्दर नगरी भकुण्डेमा ‘तेस्रो तामाङ चलचित्र महोत्सव’ हुने भएको छ । आज (मंगलबार) संघले पत्रकार सम्मेलन मार्फत महोत्सव हुने जानकारी दिएको हो । महोत्सव आगामी चैत्र २९, ३० र बैशाख १ गते गरि ३ दिनसम्म हुने संघका अध्यक्ष विकु थोकरले बताए । अध्यक्ष थोकरका अनुसार महोत्सवमा २०७० सालदेखिको तामाङ चलचित्र प्रदर्शन गर्ने भएको छ । महोत्वसमा उत्कृष्ट चलचित्रलाई नगद सहित सम्मान गर्ने बताउनुको साथै चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कलाकारहरुलाई पनि सम्मान गर्ने आयोजकले बताएको छ । महोत्सवमाफुर्सदमा
एसईई आइताबार देखि हुदैं
काठमाडौँ आइतबारदेखि सुरु हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा छात्रा परीक्षार्थी बढी देखिएका छन् । मुलुकभरबाट ४ लाख ७५ हजार ३ परीक्षार्थी सहभागी हुँदै छन् । तीमध्ये २ लाख ३६ हजार ४ सय ४५ छात्र र २ लाख ३८ हजार ५ सय ५८ छात्रा छन् । छात्राको संख्या २ हजार १ सय १३ ले बढी हो । शिक्षा पक्रकार सञ्जाल (इजोन) ले शुत्रबार गरेको अन्तर्क्रियामा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) का नियन्त्रक विष्णु अधिकारीले परीक्षा फाराम भरेकामध्ये छात्रा बढी रहेको जनाएका हुन् । कुल परीक्षार्थीमा छात्रा बढी देखिए पनि प्रदेश २ मा भने कम छन् ।फुर्सदमा